चीनले मकाउ-हङकङ र भारतले गोवा फिर्ता लिन हुने, नेपालले सिक्किम-दार्जिलिङ फिर्ता लिन किन नहुने ? – TAJA KHAWAR
January 13, 2019 Taja Khawar अन्तर्वार्ता 1
मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले सङ्कलित हस्ताक्षर नेपालका राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्र चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, बेलायत र फ्रान्स तथा सार्कका महासचिवलाई बुझाइने जानकारी दिए ।
यसको लागि नेपाल भित्रै राजनीतिक पार्टीहरुबीच सहमति हुनुपर्यो । संदनमा यो कुरा उठाउनुपर्यो । राष्ट्रिय बहसको विषय बन्नु पर्‍यो ।
जनस्तरबाट लाखौं मानिसहरुले यो कुरा उठाइराखेका छन् भने सरकार र सदनमा पनि बहस हुनुपर्यो । तर बहस हुनुपर्ने ठाउँमा बहस हुन सकेको छैन । राष्ट्रियताको चर्का कुरा गर्ने सत्तासिन दलहरुले आफ्नै पार्टीभित्र बहस चलाउनुपर्यो, सरकारमा छलफल चलाउनु पर्यो, सदनमा चलाउनु पर्यो । त्यो बहसबाट कोही पनि भाग्नु भएन । त्यो बहस गरेपछि भारत रिसाउँछ कि भन्ने सोंच्नु भएन । तर दुर्भाग्य, नेपालको नेतृत्व वर्गमा नेपालकोभन्दा भारतको हित चाहने धेरै छन् ।
चीनले हङकङ फिर्ता लिन मिल्ने, गोआ चाहिँ भारतले फिर्ता लिन मिल्ने, मकाउ पनि चीनले फिर्ता लिन सक्ने हामीले चाँही फिर्ता लिन नपाउने भन्ने हुँदैन । जापानले पनि रुसको अधिनमा भएको भूमि फिर्ता मागेको माग्यै छ । इन्डोनेसियाको उपनिवेशका रुपमा रहेको टिमोर स्वतन्त्र भइसक्यो । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
यसकारण अर्काको जमिन सधैँ कब्जा गरेर राख्न पाइँदैन भन्ने विश्वका थुप्रै उदाहरण छन् । तर हाम्रो देशमा चाहिँ जसले माग्नुपर्ने हो, उसले मागिरहेको छैन । नेपाली उखानमा जाँतोलाई भन्दा हातोलाई खस्खस् भने जस्तो भएको छ । ताप्के तातिनुभन्दा पहिला बिँड तातिएको जस्तो भएको छ । ताप्के तताउन अब नेपाली जनताले नै बल गर्नुपर्छ ।
यो त स्वतःसिद्ध भएको छ, हाम्रा नेताहरु भारतपरस्त भएर नै हो भन्ने कुरा । केही राजनीतिक दलका नेताहरु भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, त्यो हदसम्म ठीक छ । असमान सन्धिको सबैभन्दा एक नम्बरको सूचिमा त सुगौली सन्धि पर्छ, भन्ने कुरा उहाँहरु बोल्न सक्नु पर्यो ।
तर एक नम्बर सूचि छाडेर उहाँहरु सन् १९५० को सन्धिको मात्र कुरा गर्नु हुन्छ । सुगौली सन्धि जस्तो असमान अरु कुनै पनि छैन । सन् १९५० को सन्धिकै धारा १ र ८ मा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ । बेलायतसँग भएका तमाम सन्धि खारेज हुने कुरा सम्झौतामै उल्लेख छ । तमामभित्र त सुगौली सन्धि पनि त पर्‍यो ।
तपाईँले रोचक प्रश्न गर्नु भयो । वास्तवमा यसको चरणबद्ध रुपमा हेर्नुपर्छ । सन् १९४७ को अगष्ट १४ मा पाकिस्तान बन्यो । अगष्ट १५ मा इन्डिया बन्यो । व्रिटिसहरुले शासन गरिरहेको अफगानिस्तानदेखि श्रीलंका, बंगलादेश इन्डोनेसिया हुँदै बर्मासम्म यी सबैलाई इन्डिया भनिन्थ्यो ।
ती मध्येबाटै सन् १९७१ मा बंगलादेश बन्यो । अरु पनि देशहरु स्वतन्त्र भए । ती भू–भागहरु छुटिने र बन्ने प्रक्रियामा नेपालले पनि आफ्नो जमिन लिन पाउने अवस्था थियो । त्यतिबेला बेलायतसँगै कुरा गर्नुपथ्र्यो । सन् १९४७ अगष्ट १५ मा इन्डिया बन्यो र सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग करिब सबै नै इन्डियामा पर्‍यो । त्यतिबेला एक हप्तासम्म दार्जिलिङमा पाकिस्तानी झन्डा फहराएको कुरा इतिहासकारहरु बताउँछन् ।
त्यसो हुनाले हामीले अहिले पनि हामीले बेलायतसँग कुरा गर्न सक्छौं । हामी स्वतन्त्र मुलुकमा छौं । हाम्रो एउटा भाग चाहिँ उपनिवेशमा परेको थियो त्यो चाहिँ हामीलाई फिर्ता नगरीकन किन जानुभयो भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ । इन्डियासँग पनि ब्रिटिस उपनिवेशवादविरुद्ध ९० वर्ष लडेका नेताहरुले किन नेपालको जमिनमाथि उपनिवेश बनाए रु आफू उपनिवेशविरुद्ध लड्ने अनि अर्कोमाथि उपनिवेश गराउने रु भन्ने भारतसँग हाम्रो प्रश्न हुनुपर्छ । यो प्रश्न सडकबाट हामी भारतसम्म राख्न सक्दैनौं ।
सडकबाट सरकारलाई दबाब मात्र सिर्जना गर्न सकिन्छ । सडकबाट ठूलो आन्दोलनको आँधिबेहेरी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । हामीले यो विषयमा भारतसँग कुरा राख्न सरकारलाई जोड दिएका छौं । भारतसँग कुरा मिलेन भने जमिन छाडेर जाने बेलायत हो । त्यसैले बेलायतसहित त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्‍यो । हामी संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानसक्छौं ।
त्यसबाट पनि भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय सम्मपनि जानुपर्ने हुनसक्छ । तर हामीले भारतसँग मात्रै पनि कुरा राख्न सकेका छैनौं । भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नु पर्यो । भएन भने त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्यो । नेपालले बेलायतसँग वार्ता गरेर कसरी भारतको हातमा जमिन छाडेर गयौं भनेर सोधेको समेत सुनेका छौनौं । नेपालले पनि यो विषयमा भारत बेलायत र नेपालबीच त्रिपक्षीय छलफलको माग गरेको छैन ।
जसरी गोर्खा भर्तीपछि सन् १९४७ मा इन्डियाबाट ब्रिटिसहरु जानलागिरहेका थिए, उनीहरुलाई गोर्खाली फौज चाहिएको थियो । त्यसैले उनीहरुले १९४७ नोभेम्बर ९ मा त्रिपक्षीय सन्धि गरे । सोही सन्धिबाटै गोर्खाली सेनालाई विभाजित गरियो । उनीहरुको स्वार्थका लागि गोर्खा सेना विभाजन गर्नका निमित्त सन्धि गरियो तर जमिन भारतको हातमा छाडियो । त्यसरी उपनिवेश हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान कहीँ छैन ।
त्यो दोष तत्कालिन राणा सरकारको हो । त्यसबेला पदम शमसेर र मोहन समशेरले चाहँदा लिन सक्ने अवस्था थियो । सन् १९४९ मा भारत र भूटानकोबीच सुगौली सन्धि भएजस्तै नेपालले पनि सन् १९५० जुलाई ३१ मा भएको नेपाल–भारत मैत्रीसन्धिका बेला कुरा उठाउन सक्थ्यो । भारत र भूटानकोबीचको सुगौली सन्धिअनुसार ३२ वर्ग माइल जमिन भारतले भुटानलाई फिर्ता गरेको छ ।
यद्यपी अझै भूटानको जमिन भारतले ‘लिज’मा लिइरहेको छ । त्यसरी नै नेपालले पनि बेलायतले छोडेर गएपछिको भूभाग फिर्ता माग्नु पर्दथ्यो भारतसँग । यसमा भारतको पनि बदनियत देखिन्छ ।
राणाहरुले जमिनको बारेमा कुरा गर्न तुलसी मेहर भन्ने गान्धीवादी नेतालाई महात्मा गान्धी समक्ष पठाए । तुलसी मेहरलाई गान्धीले तपाईहरु यो जमिन लिनसक्नुहुन्छ लिनुस् भने । तर त्योसँगै उनले भारतको अंग्रेजको धपाउन यहाँका नेपालीहरुले साथ दिए ।
ती नेपालीहरुलाई नेपालमा गाभी सकेपछि अंग्रेज धपाउने नेपालीले तपाईँहरुलाई धपाउँदैन भन्ने के ज्ञारेन्टी छ रु भन्ने अर्को कुटनीतिक जवाफ दिए । तपाईहरुकै विरुद्धपनि आन्दोलन हुनसक्छ भनेर महात्मा गान्धीले भनिदिए । त्यहि कुरा तुलसी मेहरले राणाहरुलाई सुनाए । जसले गर्दा राणाहरु झस्किए । त्यसपछि राणाहरु जमिन नलिनेमा पुगे । राणाहरु ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ भन्नेमा पुगे । यो प्रसङ्ग दस्तावेजकै रुपमा चाहिँ छैन तर इतिहासमा यसको चर्चा चाहिँ गरिन्छ ।
पहिलो कुरा त दलका नेताहरुले हामी इतिहासमा कहिल्यै पनि हामी उपनिवेश भएनौं, हामी स्वतन्त्र रह्यौ भन्नु नै गलत हो । मेची र काली पारीका जमिनहरु व्रिटिस उपनिवेशमा रहेको थियो ।
त्यसकारण हामी इतिहासमा उपनिवेशमा रहेनौं भनेर हामीले त्यो जमिन नै फिर्ता लिन नखोजेको हो भने त हामी इतिहासमा टिष्टादेखि काँगडासम्म पुग्यौं भन्नु नै भएन । नेपालले अंग्रेजसँग लडाईं नै गरेन, सुगौली सन्धि नै भएन भन्नुप¥यो । त्यो त कसैले भन्न सक्दैन । त्यसकारण सुगौली सन्धिलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुप¥यो । दोस्रो कुरा, सुगौली सन्धि हामीले बेलायतसँग गरेको हो । बेलायतसँग गरेको सन्धि भारतसँग कसरी लागूहुन्छ ? त्यो पक्ष नै नरहेपछि सन्धि समाप्त भयो ।
एउटा भारतको आफ्नै भूमि, अर्को भारतले आर्जन गरेको भूमि’ भन्ने उल्लेख छ । कि त सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको भूमि नेपालले भारतको हुनेछ भनेर सहि गरेको हुनु प¥यो होइन भने नेपालको भूमि फिर्ता पाउनुपर्छ भन्न किन खुट्टा कपाउँने ? हङकङ बेलायतको थियो, कसरी चीनमा फिर्ता भयो भनेर नेपाली नेताहरुले सोच्नुपर्छ की पर्दैन ? जसरी गोवा भारतले लियो त्यसरी नेपालको दार्जलिङ फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ की पर्दैन ? आज भारतसँग माटो छ कागज छैन । त्यसकारण हामीले कागज अनुसारको माटो लिनु पर्‍यो भनेर यो अभियान सुरु गरेका हौं ।
भोलि ग्रेटर नेपालको कुरा नउठाउने पार्टीलाई जनताले भोट नै नदिने पनि अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण आम मानिसहरुले भोलि सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने दिनपनि आउँछ । यदि नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि नलिने हो भने सबै पार्टीले एकसाथ त्यो भूमि भारतकै भयो भनेर भनिदिनु पर्‍यो ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुले एक पटक साहस गर्नु प¥यो । हाम्रो मनमा रहेको भारतको डर हटायौं भने ग्रेटर नेपाल प्राप्त हुन्छ । हामीले नुन तेल रोक्ने चिन्ता गर्नु भएन । भारतले हामीलाई नुन तेल सित्तैमा दिएको पनि होइन । हामीले पारवहन सन्धि गरेका छौं, बाहिरबाट पनि ल्याउन सक्छौं । हामी अत्यन्तै डरायौं । भारत आफै गोर्खा रेजिमेन्टबिना टिक्न सक्दैन । नेपालका युवाहरु बेरोजगार भए भनेर उनीहरुले नेपालीलाई रोजगार दिएको होइन ।
गोर्खा सेना चाहिने भए, नेपालको पानी चाहिने भए सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता हुनुपर्‍यो भन्ने आँट गरौं । खबरडबलीसंगको कुराकानीका आधारमा नेपालले कारण दिदै भन्नुभयो, त्यसकारण नेपालले आफ्नो शक्तिको पहिचान गरिदिए हुनेथियो भन्ने हाम्रो आग्रह हो । हामी कस्तुरी जस्तै भएका छौं । हामीले हाम्रै शक्तिलाई पहिचान गर्न सकेका छैनौं ।
खबरडबलीबाट महत्वपूर्ण तर पुरानो अन्तर्वार्ता।
जताततै लापरबाही, ६ बर्स बित्यो तर बनेन पुल, कसको पालामा उद्घाटन भएको होला त सो पुल?
सचिव कुटेको विरोधमा उत्रिए कर्मचारीहरु : मुख्यमन्त्रीलाई दिए २४ घण्टे यस्तो अल्टिमेटम – News Mala